GABOOYE IYO GUMEYSTEYAAL: Goobitaanka Geesi Walaaleeya Somaliland!‏ (RIWAAYAD QORAN) | Somaliland Post
Home Maqaallo GABOOYE IYO GUMEYSTEYAAL: Goobitaanka Geesi Walaaleeya Somaliland!‏ (RIWAAYAD QORAN)
GABOOYE IYO GUMEYSTEYAAL: Goobitaanka Geesi Walaaleeya Somaliland!‏ (RIWAAYAD QORAN)
Waa riwaayad qoran. Curiyaheedu waa Siciid Gahayr… Waxa soo saaray Akadamiga Suugaanta iyo Cilmibaadhista oo magaciisa rasmiga yahay SAM-KHAATUMO! Muddo afar bilood ah ayay soconaysaa haddii Alle idmo! Waa xujo ku socota nin kasta oo sheegta aqoon kuna abtirsada Somaliland. Alla maxaa indheer-garad ceeboobi doona marka la gaadho bisha sagaalaad haddii Eebbe igu simo. Waa geed ay ku garnaqsan doonaan Gabooye iyo beelaha kale ee Somaliland oo riwaayaddu u aqoonsanayso Gumeysteyaal. Haddii la ii hanjabi lahaa, waxa aan ogahay in samirka lagu gaadho guul! Dhaaxo ayaan qalin, af, caqli, caaddifad ugu adeegay reer Somaliland, gaar ahaanna inta aan ka guursan Gabooye. Nin liisan bixi kara oo aan cay aan u debcin baan ahay, halgankii Nebi Maxamed ayaan ka bartay casharro aan ku tamariyo. Magaca aan sitaa waa Gabooye, waxa aan hiil u ahay muslimiinta aad hayb-soocdeen! Waxa ka qayb-doona
Gobsoor: Jilaa ka socda beelaha wax hayb-sooca
Gumeyste: Wiil lagu ababiyay nacaybka Gabooye oo 13 jir ah!
Gaari: Dhabeel aqoonyahan ah, haweenay ka mid ah beel-weynaha Gabooye
Garaad: Madax-dhaqameed reer Somaliland ah
Gadhweyne: Caalin ku xeel-dheer diinta
Goomayste: Siyaasi gabay doorkii Gabooye ka mudnaa!
Ganacsade: Hantiile dadka ku guubaabiya in aan Gabooye laga guursan
Gadgaddoon: Shan-wejiile mar iska dhiga Abwaan, kol Macallin, Kol suxufi, kol
Gawgaw…. Fura albaabka, miyaanay Sheekhii, Abwaankii, Suldaankii, Garaadkii,
Madaxweynihii, Guddoomiyihii Baarlamaanka, Ugaaskii, Boqorkii, Aqoonyahankii, Wasiirkii, Agaasimihii guud, Taliyihii ciidammada Qaranka, Booliska, Asluubta, Garsoorkii maxkamadda iyo indheer-garadkii Somaliland joogin… garaac kale albaabka fura dee adeer, waa sidee….
Gabooye: Waaryaadheen iska warrama?
Gumeyste: Acuudu billaahi mina shaydaani rajiim. Waar kaagani xaggee ayaad naga soo salaantay. Ma geydid in aanu bariidada kaa qaadno, waxaad tahay midgaan, yibir, cadaqaate, samaayo-ururshe, ma magtii Bucur bacayrkii daallinka ayaad naga rabtaa! Adeer wiilba nooma dhalane, ma gabadhii uurka lahayd ee aad maalintii dhawayd sheedda ka dheehatay ayaad wiil moodday. Imaka samaayaha waxaanu siinaynnaa beelaha kale ee Somaliland. Aabbo wuxuu yidhi albaabka ha ka furina nin Daammi ka yimi!
Daammi waa dhulkeenniyo
Duqa aanu tebaynnaa
Xumo kuu dardaarmee
Da’yaraan adaa wacan
Daliil looga helin karin
Daayinkaan ku mariyee
Duhur baan u soo kacay
Inaan aabbe deex iyo
La wadaago doodee
Dafiraad hadduu baxay
Aniguna daleel iyo
Milic duuri maayee
Ii diirnax maantoo
Darmo ii dhig gogoloo
Islaam baan kuu diran
Deyn waxan ku leeyahay
Duunyada ka haystee
Igu sii dinnaahiyin
Duunyo goobi maayee
Daliilkuu cuskaday sheeg
Wuxuu yidhi aabbo
Hadduu jin istaaago
Gabooyuhu waa ul
Iblaysku ku guuro
Hadduu iniq maanku
Udgoon ma qireenba!
Dad weeye islaamka
Ku sheegta af beena
Haddaad irbad siiso
Dad weeye aqoonta
Sidii uskag mooda
Iskuulka ma joogo
Aheey liq xalaala
Afkoodu ma quuto
Bakhtaa u ah oonta
Arsaaqda u fiican
Hadii jin istaago
Hadduu yay islaam dhab
Afweyne cidduu yay
Kumaa afti qaaday
Inaan nahay uunka
Dad iinta u kow ah
Nin uunsi u jeelay
Haddaan mar u oogno
Uhduu u dhacaaye
Kumaa i amaahshay
Afkaygu ku dayrshay
Xun bay uriyaane
Wuxuu axdi doono?
Haddeer ADEM fiiri
Libaanna bal eega
Ogow waa Barkhad waa gob
Istaahil wasiir ah
Haddaan jahli eednay
Awaare ka toosnay?
Haddaan bakhti eegto
Maxaan u afeeyay
Inkaarta u quudhay
Bal keen marag iinta
“anaa arkayeey” leh
Edaabta ha laalin
Odhaahda ka dhawrso
Ollogaygu waa dad
Ku afuufa meele
Ka iftiima qoorta
Dhegta waa u eegga
Orta baaqa yeedhmo
Aroortii ma dhuuxo
Arrad baa ka muuqda
Wuxu aabbo leeyay
Aji baan haybta
Eebbaa na doortay
Ku aguugna beenta
Iidoorku waa dad
Axdiyaal ku qaatay
Arbe waa docdooda
Oday waa dhankooda
Qeybe waw ilduufnay
Arrimaa gudaa xil
Amnigaan u gaadhnay
Ahe maalka Haashin
UFO yaa labeeya
Sidaan kuu af-duubay
Awdaleey car nuuxso
Ku-xigeen la aammus
Anigoo ESTII ah
Adh-caddeeye yaa leh
Ku afuuf Darwiishka
Faqash ima amrayso
Irriday ku dhaafin
Tolwaa waa ab Daahir
Illow waan halmaamay
Abaal yeelan maayo
Haddii aad iskuulka
Afar gee i leeday
Eeggaan ku siine
Adkaysoo sab baad tay
Ajar weeye khayrleh
Gunta waan albaabi
Gobta waan ilaashan
Yibir waan adeegsan